Sina fanapahana fanapahana diamondra, fariby tsofa diamondra, felam-boninkazo vita amin'ny keramika, fantsom-bozaka marbra, ravina fanapahana grenady, orinasa mpamokatra tsofa ary mpanamboatra | Boda
Fantsom-bozaka fanapahana diamondra, lelam-pandrefesana diamondra, felam-boninkazo vita amin'ny keramika, fantsom-bozaka marbra, ravina fanapahana grenady, tsofa tsofa
Ny fanapahana diamondra dia karazana fitaovana fanapahana, izay be mpampiasa amin'ny fanodinana ireo fitaovana mafy sy mora vidy toy ny vato, beton, takelaka mialoha, lalana vaovao sy taloha, seramika sns. Ny faritry ny fanapahana diamondra dia misy ampahany roa: ny matrix sy ny loha cutter.
Ny matrix no ampahany manohana ny lohan'ny fanapahana mifamatotra, raha ny lohan'ny fanapahana kosa no ampahany manapaka amin'ny fizotry ny fampiasana. Ny lohan'ny fanapahana dia holaniana tsy tapaka amin'ny fampiasana azy, raha tsy hatao kosa ny matroka, Ny antony ahafahan'ny loha fanapahana dia satria misy diamondra ao aminy. Ny diamondra no fitaovana mafy indrindra amin'izao fotoana izao, manapaka ny zavatra namboarina tamin'ny alàlan'ny fikororohana tao anaty lohan'ny fanapahana izy, ary ny zana-kazo diamondra dia nofonosina vy tamin'ny lohan'ny fanapahana.
Fomba fanamboarana ny fanapahana diamondra:
1. Sela fanapahana diamondra voafitaka: mizara ho sinterina mangatsiaka manery sy mpanery manery mafana.
2. Lasitra fanapahana diamondra: misy karazany roa ny welding: fantsom-pandrefesana matetika sy fantsona laser. Ny fantsom-pandrefesana haingam-pandeha dia hampiraikitra ny lohan'ny fanapahana sy ny substrate amin'ny alàlan'ny mpanelanelana amin'ny hafanana avo lenta, ary ny lasitra amin'ny laser dia handrehitra ny sisin'ny fifandraisana amin'ny lohan'ny fanapahana sy ny substrate amin'ny alàlan'ny tara-pahazavana avo lenta hamoronana fitambarana metalyorika.
3. Volom-bato fanapahana diamondra elektrôlôtra: ny vovo-dohan'ilay loha fanapahana dia miraikitra amin'ny vongan-tany amin'ny alàlan'ny fomba elektroplating.
1. Mitohy tsofa tsofa mitohy: ny tsofa tsofa mitohy dia matetika amin'ny alàlan'ny fomba fanivanana. Ny fatorana varahina dia matetika ampiasaina ho fitaovana matrix fototra. Ny rano dia tsy maintsy ampiana mba hiantohana ny vokatra fanapahana rehefa manapaka, ary ny karazana banga dia azo tapahina amin'ny laser.
2. Sombin-kapoaka fanapahana karazana: nify simba, haingam-pandeha haingana, mety amin'ny fomba fanapahana maina sy lena.
3. Tabilao fanapahana karazana turbinina: ampifandraisina amin'ny tombony azo amin'ireo zavatra roa voalohany, ny nifify nify dia manolotra turbinina toy ny concvex convex mitovy, izay manatsara ny hafainganan'ny fanapahana ary maharitra ny androm-piainana.
Ny karazan-tsofa diamondra hafa dia voafantina amin'ny fitaovana samihafa, ary ny famolavolana vovoka samihafa dia mety amin'ny toetran'ny fitaovana samihafa, izay misy fiatraikany mivantana amin'ny kalitao, ny vokany, ny tahan'ny mari-pahaizana ary na ny vidiny sy tombony azo avy amin'ireo vokatra ara-materialy.
Ny anton-javatra misy fiatraikany amin'ny fahombiazana sy ny ain'ny diamondra boribory boribory dia ny fanapahana ny masontsivana, ny haben'ny zana-kazo diamondra, ny fifantohana, ny hamafin'ny fatorana, sns.
1. Mety amin'ny fanapahana marbra terrazzo.
2. Fanapahana ny simenitra simenitra, fitaovana matevina ary fitaovana tsy metaly.
3. Fametrahana làlana sy tetezana ary ony.
4. Ny fanaovana sokitra ny sisin-dàlana sy ny tokotanin'ny tetezana.
5. Ampiasaina betsaka amin'ny fananganana kaomina, fanarenana ny làlana, fanamboaran-dalamby seranam-piaramanidina, arabe simenitra sy toerana fananganana hafa, indrindra mety amin'ny asa fanapahana asfalta sy simenitra
Amin'ny fampiharana, ny hafainganam-pandeha tsipika boribory boribory diamondra dia voafetran'ny fepetra ara-pitaovana, ny kalitaon'ny tsofa tsofa ary ny fananan'ny vato hokapaina. Raha jerena ny androm-piainan'ny serivisy tsara indrindra sy ny fahombiazan'ny fanapahana ny tsofa, ny hafainganam-pandehan'ilay tsofa dia tokony ho voafantina arakaraka ny toetran'ny vato samihafa. Rehefa mitsofa granite, ny hafainganam-pandehan'ny tsofa dia azo voafantina ao anatin'ny 25m ~ 35m / s. Ho an'ny granite manana votoatin'ny quartz avo lenta ary sarotra ny manapaka, ny fetra ambany misy ny hafainganam-pandehan'ilay tsipika dia mety. Amin'ny famokarana biriky tarehy granita, kely ny savaivon'ny boribory boribory diamondra ary ny hafainganam-pandeha dia mety hahatratra 35m / s.
Kavina fanapahana diamondra 150 mm, lelam-bato miendrika diamondra 180 mm, lelam-bato miendrika diamondra 350 mm, ravina vitribato maranitra maranitra 400 mm, lelan-tsofa boribory 500 mm, ravina fanapahana rindrina diamondra 600 mm, ravina tsofa 700 mm rindrina, fanapahana antontany 800 mm ravina, savona boribory diamondra 900 mm, antsy tsofa diamondra 1000 mm, savai-tsofa 1200 mm.
Ny tahan'ny famahanana dia ny hafainganam-pandehan'ny vato hokapaina. Ny habeny dia misy fiatraikany amin'ny tahan'ny tsofa, ny hery eo amin'ny tsofa tsofa ary ny famafana ny hafanana ao amin'ilay faritra misy tsofa. Ny lanjany dia tokony hofidina mifanaraka amin'ny toetran'ny vato hokapaina. Amin'ny ankapobeny, ny fanapahana vato malemy kokoa, toy ny marbra, dia mety hampitomboina amin'ny hafainganam-pandehan'ny sakafo, raha ambany loatra ny hafainganam-pandehan'ny sakafo dia mora kokoa ny manatsara ny tahan'ny tsofa. Raha ambany loatra ny tahan'ny sakafom-biby, dia azo mora tototra ny sisin'ny diamondra. Na izany aza, rehefa mikaroka granita miaraka amin'ny firafitry ny voamadinika sy ny hamafin'ny tsy fitoviana dia tokony hahena ny hafainganam-pandehan'ny sakafo, raha tsy izany dia hiteraka fiparitahan'ny diamondra ny fihenan'ny tsofa ary hampihena ny tahan'ny tsofa. Ny hafainganam-pandehan'ny granite amin'ny sawing dia matetika no voafantina ao anatin'ny 9m ~ 12m / min.
BOSENDA dia manome karazana kapila fanapahana / Diamond Saw Blade / Diamond Cutting Blade. Ny loha dia maranitra sy mahazaka fitafiana, ny androm-piainany dia lava kokoa noho ireo kapila fanapahana amin'ny tsena ankapobeny. Manome famaritana feno momba kapila fanapahana samihafa izahay, ary amidy amin'ny kaontinanta rehetra ny vokatray. Azontsika atao ihany koa ny manao kapila fanapahana tsy manara-penitra arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
Ny ampahany amin'ny lohan'ny kapila BOSENDA dia namboarina tamin'ny alimo matevina avo lenta izay mahatonga ny kapila mateza kokoa sy maharitra ny fiainana miasa.
Previous: Hamazo elektrika, paosin-kery elektrika, SDS, Max, Hex, pao maranitra, paingotra fisaka, lavaka efatra ary paiso hexagonaly dimy, paiso pneumatika
Manaraka: Fitotoana diamondra, fitotoam-bato, fitotoana vato, fitotoana vato, fitotoana vato
Fitotoana kofehy, kofehy fanapahana res, ste ...